किन अनमोलले गरे यस्तो ? हुटिङको लागि पैसा दिएर दर्शक ल्याएको आरोप | Screennepal
किन अनमोलले गरे यस्तो ? हुटिङको लागि पैसा दिएर दर्शक ल्याएको आरोप
गत शुक्रबार माघ २६ गते देखि देशभर नेपाली चलचित्र “कृ” सोलो रिलिज भयो । “कृ” संग कुनै अरु नेपाली चलचित्र भिड्न आएको देखिएन । तर बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारको फिल्म “प्याडम्यान” भने प्रदर्शनमा आएको थियो । शुक्रबार चलचित्र “कृ” ले सोच जस्तो व्यापार गर्न सकेन । जुन सोच निर्माण पक्षले राखेको थियो त्यो भन्दा निकै कम दर्शकहरु हल छिरे । चलचित्रको पनि मिश्रित प्रतिक्रिया आयो । यस्तै मिडियाकर्मीहरुले पनि चलचित्रको बिषयमा खुलेरै समिक्षा गरे । तर समिक्षकहरुको अनुसार चलचित्रको कथा वस्तु र प्रस्तुति निकै कम्जोर भएको कुरा आयो । अधिकांश समिक्षकहरुले यहि नै लेखे ।
यस्तै चलचित्र रिलिज भएको आज चौथो दिन बिती सक्दा यति बेला मिडियामा अनमोल केसीलाई लिएर धेरै कुरा आइरहेको छ । यहि बिषयमा चर्चित अनलाईन मिडिया डि.सी नेपालका संवाददाता सुरक्षा भट्टराईले अनमोलको बिषयमा एक सनसनीपूर्ण खुलासा गर्नुभएको छ । उहाको अनुसार अनमोल केसीको लागि मरिहत्ते गर्ने फ्यान नक्कली हुन् । उहाले चलचित्र “कृ” को ४ दिनको सबै गतिबिधि हेरेर यो समाचार सम्प्रेषण गरेको देखिन्छ । उहाको अनुसार चलचित्र “कृ” ले शुक्रबार पहिलो दिन दर्शकको साथ नपाएपछि धेरै सिनेमाघरबाट धेरै शो गुमाउनु पर्यो तर अचानक शनिबार भने दर्शकको भिड “कृ” मा धेरै देखियो । “कृ” सबैतिर हाउसफुल भएको खबर आयो । तर उहाको अनुसार उक्त दर्शकहरुको भिड “कृ” को मात्र नभएर बलिउड चलचित्र “प्याडम्यान” को पनि भएको दाबी गर्नुभएको छ ।
दुवै चलचित्रको भिडलाई एकै ठाउँमा राखेर सबै क्रेडिट अनमोल आफुले लिएको डि.सी नेपालका संवाददाता सुरक्षा भट्टराईको भनाई रहेको छ । उहाको अनुसार सिनेमाघरमा दर्शक मिसिएका कारण अनमोलको क्रेज ज्यादा देखियो । यो घटना क्रमले चलचित्र “कृ” ले दोस्रो दिन दर्शक त पायो तर ती सबै दर्शक आफैं हलसम्म पुगेका थिए वा उनीहरुलाई हलसम्म पुर्याइएको थियो भन्ने प्रश्न उब्जायो तर त्यसको पनि उहाले खण्डन गर्नुभएको छ । उहाले फेरी आईतबार काठमाडौँको कुमारी सिनेमा घरमा राखिएको बिशेष शो तर्फ कुरा मोड्नु भयो जहाँ देखि यी सबै राज खुलेको उहाको दाबी छ । उक्त बिशेष शो मा थुप्रै पत्रकार र रंगकर्मीको पनि उपस्थित रहेको थियो । भीड त्यहाँ पनि थामिनसक्नु नै थियो तर त्यहाँ सबै किनिएका दर्शकको मात्र उपस्थिति रहेको डि.सी नेपालका संवाददाता सुरक्षा भट्टराईको भनाई रहेको छ ।
यस्तै उहाको अनुसार कार्यक्रममा जब अनमोलको प्रवेश भयो दर्शकलाई हुटिङको लागि आग्रह गरियो । यस्तो आग्रह निकै अस्वभाविक देखिन्थ्यो । अनमोल सदाझै बडीगार्ड सहित उपस्थित भएका थिए । केही फ्यान हातमा फूलहरु लिएर बसेका थिए । एक एक गर्दै अनमोलले पनि फूल लिएका थिए । अनमोल सँगै चलचित्रकी नायिका अदिती बुढाथोकी र अनुप बिक्रम शाही पनि थिए र जसले अनमोललाई हुटिङ गरेका थिए उनैले अनुप र अदितीलाई पनि हुटिङ गरिरहेका थिए । त्यस्तै उहाको अनुसार ती सबै उपस्थित फ्यान प्रायोजित थिए । एकै चलचित्रका तीन फरक फरक कलाकारका फ्यान एउटै हुनु अस्वाभाविक मानिन्छ । अर्थात ती फ्यान सबै किनिएका थिए । अनलाईन मिडिया डि.सी नेपालका संवाददाता सुरक्षा भट्टराईले अनमोलको फ्यान नक्कली रहेको र सबैलाई पैसा तिरेर हुटिङ गर्न उक्त स्थानहरुमा ल्याइएको दाबी गर्नु भएको छ ।
यति बेला यो खबर धेरै संचारमाध्यममा छ्यापछ्याप भईरहेको छ । यो सबै घटना क्रमलाई हेर्दै जाँदा नेपाली दर्शक र मिडियालाई कहिलेसम्म किन्ने र किनिएका फ्यान देखाएर कहिलेसम्म खल्लो स्टारडम देखाउने ? जस्ता प्रश्नहरु उठ्छ । यसले जो साच्चिकै नेपाली कलाकारहरुको फ्यान रहेका छन् उहाहरुलाई नराम्रो लाग्नुको साथै कलाकारहरु देखि विश्वास पनि उठ्न सक्ने ठुलो संकेत देखिन्छ । यस बिषयमा कलाकारहरु सबैले गम्भीर रुपले सोच्ने हो कि ? अनमोल केसीको यो सनसनीपूर्ण खुलासाले ३ दिनको चलचित्र “कृ” को कलेक्सन जुन मिडियामा खुलाईएको छ त्यो पनि झुट हो या सत्य भन्ने कुरामानै प्रश्न चिन्न लगाईदिएको छ ।
Previous Post"पंचायत" मा निता १४ बर्षे चंचेली किशोरी Next Postसलोनको लागि सारा र प्रियंकाको भिडन्त, "सुश्री सम्पत्ति" को निर्माण घोषणा